कस्तो अचम्म ! मोरङमा भैँसी करणी गर्ने युवक पक्राउ, करणी गरेको स्वीकार ! — Paschimnews.com News From Nepal
पश्चिमन्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७६/१/२० गते
भैँसी करणी गरेको अभियोगमा मोरङमा एक जना विरुद्धमा अदालतमा फिरादपत्र दर्ता भएको छ ।
मोरङको रतुवामाइ नगरपालिका – २ का ४० वर्षीय मङ्गल हस्दा(संथाल) विरुद्धमा अदालतमा फिराददर्ता भएको हो । हस्दाले सोही ठाउँ बस्ने रानी टुढुको भैँसी करणी गरेको आरोपमा भैँसीधनीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दा दायर भएपछि प्रहरीले हस्दालाई पक्राउ गरेको छ ।
छिमेकीको गोठमा बाँधेको भैँसी फुकाएर करिब ७ सय मिटर परको बाँसझाङमा लगेका थिए । भैंसीको दुवै खुट्टा डोरीले बाँधेर करणी गरेको उजुरीका आधारमाप्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय सिजुवाबाट गएको टोलीले घटनास्थलबाट हस्दाको कपडा बरामद गरेको थियो ।
‘पक्राउ परेका हस्दाले भैंसी करणी गरेको स्वीकार गरेका छन् । पशु करणी दुनियाँवादी फौजदारी अर्थात (व्याक्तिवादीं) मुद्दा हुने भएकोले यस्तो मुद्दा अदालतमा सोझै दर्ता हुने व्यवस्था छ ।
शुक्रबार पशु करणी गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत मोरङमा भैसी धनी स्वयम उपस्थित भएर ‘फिराद’दर्ता गरेको अदालतको श्रेस्तेदार इश्वरमाणि ओझाले जानकारी दिए । पशु करणी गरेको ठहर भएमा १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवनाहुने कानुनी व्यवस्था छ ।